Inqwelomoya entsha esuka eSan Jose isiya ePalm Springs kwiAlaska Airlines
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inqwelomoya entsha esuka eSan Jose isiya ePalm Springs kwiAlaska Airlines
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Inqwelomoya entsha esuka eSan Jose isiya ePalm Springs kwiAlaska Airlines.
Ukukhusela inkonzo engapheliyo kwiSan José ibe yinto ephambili kwisikhululo seenqwelomoya sasePalm Springs, kuba iSan José, kunye neBay Area yonke, yindawo ephezulu yokuya kubahlali kunye namashishini kwiCoachella Valley.
Ukusukela namhlanje, abahambi banokonwabela unyaka wonke, inkonzo engayekiyo phakathi kweSikhululo seenqwelomoya saseMineta San José (SJC) kunye Isikhululo seenqwelomoya sasePalm Springs (PSP), Enkosi Ku Alaska Airlines.
Iinqwelomoya zemihla ngemihla zihamba eMineta San José ngo-8:10 ekuseni, zifika Izixhobo zePalm kanye phambi kwe-9:30 am, yonke imihla. Kwabo basePalm Springs, inqwelomoya yemihla ngemihla eya eSan José ihamba ngo-10:10 am
"Inkonzo engapheliyo kwiPalm Springs ibe yindlela ecelwe kakhulu iminyaka eliqela," utshilo uJohn Aitken, uMlawuli we-SJC wezoPhapho. "Olu nxibelelwano phakathi kweSilicon Valley kunye neCoachella Valley luphawu olumnandi kakhulu lokuchacha, kwaye yomibini le mimandla iya kuxhamla kwinkonzo yemihla ngemihla."
“Ukufumana inkonzo engayekiyo eSan José ibe lixabisoindawo yePalm Springs International Airport,” utshilo u-Ulises Aguirre, uMlawuli oyiNtloko wezoPhapho kwisiXeko sasePalm Springs. “ISan José, kunye nayo yonke iBay Area, yeyona ndawo iphambili yabahlali kunye namashishini kwiCoachella Valley kwaye siyabulela Alaska Airlines yokudibanisa i-PSP kwi-SJC.
Ukuqaliswa kwenkonzo kuqalise ixesha leholide yoMbulelo exakekileyo, eqala namhlanje, uMineta San José International elindele abahambi abangama-400,000 kwimpelaveki ezayo.